ခိုင်မာတဲ့ R & D နည်းပညာ
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်အများအပြားအတွက် ODM / OEM ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးခဲ့သည်
ထုတ်လုပ်မှုတစ်ခုလုံးမှအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုကို ၀ င်လာသည့်ပစ္စည်းမှစုဆောင်းသည့်အထိအထိတိုးမြှင့်ပေးသည်.
အလိုအလျောက်စက်ကိရိယာများနှင့်အတူ, ထုတ်လုပ်မှုသည်ပိုမိုထိရောက်သည်။ အပိုပစ္စည်းတိုင်းကိုစံနှင့်တိကျသည်.
အရောင်းအကြိုနှင့်ရောင်းပြီးနောက်အခက်အခဲပစ်ခတ်ခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှု. အလှအပပစ္စည်းကိရိယာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်မည်သည့်စုံစမ်းမှုမဆိုကျွန်တော်တို့နှင့်သာတိုင်ပင်ပါ, ငါတို့မှာရင်းမြစ်တွေရှိတယ်.
Guangdong Dongpin အလှပြင်ဆေးပစ္စည်းကိရိယာကုမ္ပဏီ, Ltd. ထူထောင်ခဲ့သည် 2002 အလှအပပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ODM အစီအစဉ်များအတွက်အထူးထုတ်လုပ်ထားသောထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်. စက်ရုံစကေး20,000㎡,4အဓိကအလိုအလျှောက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ, ထုတ်လုပ်မှုတစ်ခုလုံးမှအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစစ်ဆေးရေးမှူးများ ၀ င်သောပစ္စည်းမှစုဆောင်းခြင်းအထိဖြစ်သည်.
LQ011-001 Ipl ဆံပင်ဖယ်ရှားရေး
3 ရောင်းရန်အကောင်းဆုံးလျှပ်စစ်အနှိပ်အိပ်ရာ 2020
DongPin အလှအပ & Medical Technology isabeauty supplier offering premium-quality of beauty equipment. Our ranges of products include Chinese Electric Beauty Bed, Salon Bed, Salon Trolley Cart, Spa Bed, Esthetician Bed, Pedicure Spa Chair, Hydraulic Massage Table, Electric Massage Beds, Salon Table and Manicure Stool made in China.
We are offering custom လျှပ်စစ်အလှအပကုတင်, Salon Bed, and Spa Bed in bulk for our clients all over China.